Photo on Photo - Fontmania APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာသားမ - Fontmania
ဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာသားမ - Fontmania APK ကို
ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်ကိုစာသားအသစ်တခုလမ်းကြောင်းသစ်သည်! ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို အသုံးပြု. ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်ရေးသားဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်!
တခါတရံမှာစကားအနည်းငယ်အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဟောပြောပါလေစေနိုငျပါသညျ! "ဓာတ်ပုံကိုပေါ်စာသား" တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံများ, app မှလက်ျာဘက်ဝေမျှဖို့ဒါလွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းမွေးနေ့သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ကတ်များသို့သင်၏ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ် pics လှည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အကြီးအပလီကေးရှင်းပါ!
အခြားသူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုနေသည်ဘယ်လို Explore: Instagram ကိုအပေါ် #fontmania hashtag ကိုသုံးပါနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများက '' စာပိုဒ်တိုများနှင့်ကိုးကားထံမှဖှယျစိတ်ကူးများသင်ယူကြသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူကအခြားသူများအားလှုံ့ဆော်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်းကိုသင်၏စာတန်းများကိုပဲ! အဆိုပါတောက်ပဓာတ်ပုံများပင် @fontmania အပေါ် featured စေခြင်းငှါ, built-in Insta စတုရန်းပိုကောင်းတဲ့ app ကိုအတွေ့အကြုံအတွက်အသုံးပြုမှု!
ဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာသားနှင့်အတူ - Fontmania သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
- အလွယ်တကူဓာတ်ပုံရိုက်အပေါ်စာသားကို ထား. ,
- သင့်ဓါတ်ပုံတွေအဘို့ကွဲပြားခြားနားသော frames များကိုသုံးပါ,
- ဓါတ်ပုံပေါ်မှာရေးထား - တစ်ဦးစတိုင်စာသားကိုနှင့်အတူမွေးနေ့ကတ်များနှင့်အားလပ်ရက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖန်တီး;
အဘယ်သူမျှမကပိုပျင်းစရာ pics ။ ပုံစံက "ဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာစာသားကို" သို့ပြောင်းပါ။ သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှု Explore ။ ဓာတ်ပုံပေါ်မှာစာသားမ - ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူသင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေပါ။
အသစ် update ကိုမရရှိနိုင်ပါ! ဤတွင်သစ်ကိုဖွင့်အဘယျသို့င်:
- ကျနော်တို့လုံခြုံပြီး GDPR နှင့်အတူလိုက်နာရမည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတတျနိုငျဆုံးမှဆက်လက်။
- ထို့ပြင်, ငါတို့သည်သင်တို့သေချာပေါက်သတိထားမိပေမယ့်ကျိန်းသေ app ကိုနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။
သင့်ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ခံမှုနှင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! support@apalon.com မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဝေမျှဖို့ချီတုံချတုံမထားပါနဲ့။
32.28 ကို MB
Apalon Apps ကပ